I-Cathedral yasePuno, iCatedral de Puno-Puno
EMzantsi Melika EPeru Puno
Idilesi: Jr. Ayacucho, Puno, ePeru
Umhla wokwakhiwa: 1669-1757.
Umsunguli: Sylvester Valdez
Umqambi: uEliolio Hart Terre
Isakhiwo sezakhiwo: I- Baroque
I-Puno idolophu encinane esempuma-mpuma yePeru ngaselunxwemeni lweLake Titicaca . Yasekwa ngo-1668 nguKumkani Pedro Antonio Fernandez de Castro. Kwaye emva konyaka, iziseko zekontrare enkulu yePuno (Catedral de Puno) zafakwa.
Umakhi kunye nomyili we sakhiwo nguSimon de Astra. Ukwakhiwa kwagqitha ngaphezu kwekhulu kwaye kwagqitywa ngo-1772. Ngenxa yoko, isakhiwo esikhulu saso savela phambi kwabemi beli sixeko, ekwakhiweni kwezinto ezihambelanayo phakathi kweBaroque kunye namazwe asePeruvia. Ngelishwa, ngowe-1930 umlilo wawutshabalalisa inxalenye emangalisayo yesakhiwo kunye nemizila egcinwe apho.
Iimpawu eziqhelekileyo zedolophu
Into ebalulekileyo yale nkedara ePeru yinto elula yokuhlobisa kwangaphakathi kunye nomlinganiselo omkhulu wokukhanya kunye nendawo ngaphakathi. Konke oku kunika iindwendwe ingqiqo yenkululeko. Umhlobiso oyintloko wethempelini yimizobo eyenziwe ngamacandelo ahlukeneyo kunye nezitayela. Okuphawulekayo apha isibingelelo sikaEmilio Hart Terre. Ubungqina be-cathedral buhlotshiswe ngamanani omkhosi kunye nabantu.
Ipuno i-300 km ukusuka eArequipa - enye yezona zixeko ezinkulu ePeru . Inkundla yamatye ifumaneka kwi-Plaza de Armas, kufuphi neziko lolwazi lokukhenketho, apho ungafikelela khona kwimoto eqashiweyo . Kwakhona, i-cathedral ifikeleleka ngenyawo, ihamba ngeenxa zonke zesixeko.
Iziqithi ezikhukhula zaseUros
Casablanca - ezikhangayo
I-Airport yaseRodriguez Ballon
I-Pereslavl-Zalessky - indawo yokujonga indawo
Iyeza laseTibetan - ukuhlambulula umzimba
Ulwalamano - unyango
Indlela yokucoca isisu esezantsi?
Iingcebiso zengqondo - indlela yokugcina intsapho?
Ulwaphulo lwe-Ultrasound - izibonakaliso kunye nokuchasene
I-Chops - recipe
Vareniki nge-Adyghe ushizi - iresiphi
Iimpawu ze-Kit ze-qigong zabaqalayo
Yiyiphi eyona yobusi obuncedo?
I-Pea isobho kwi-multivariate
UKate Middleton uvelisa iincwadi malunga nokukhulisa abantwana
Ungayifaka njani umsila we-soy?
I-Flashmob ekuxhaseni uVictoria Beckham izuza kwi-Instagram
I-sodium yeSulfacil kwimpumlo
32 indawo ezifanelekileyo zokubhala tattoo
Iseshoni yesithombe sonyaka omtsha kwi studio
Izihlunu - Ehlobo ngo-2014
Umfanekiso womtshakazi 2014
Ukutya kweShokoleta iintsuku ezi-7